Affenpinscher - Maxaa Laga Filayaa Noocyadan Ey - Taranka
Maanta 'Affenpinscher' wuxuu raadin karaa asalkiisa eeyaha laga keenay Jarmalka.
Eeyaha oo aan u kala saari karno inay yihiin Affenpinschers maanta, waxay ka soo muuqdeen farshaxan Jarmal oo soo taxnaa qarnigii 16aad: iyagoo ku muujinaya inay yihiin jileec iyo wehel. Si kastaba ha noqotee, sida runta ah noocyo badan, ma jiraan diiwaanno qoran oo la isku halleyn karo oo ku saabsan nooca illaa dhammaadkii qarnigii 19aad.
Waqtigaan, waxay umuuqataa inay jiraan laba cabir oo ah xayawaannada xayawaannada leh ee silig-timo leh. Nooc balaaran, oo afka ka dheer oo afka furmay iyo mid yar, madax wareegsan, oo afka ka gaaban oo daamankara. Xaqiiqdii waa hubaal in nooca weyn uu markii dambe noqday Miniature Schnauzer, kii yaraana wuxuu noqday Affenpinscher.
Sannadkii 1902, waxaa la isku dayey in la qoro tii ugu horreysay ee 'Affenpinscher Breed Standard', oo ay qortay Naadiga Berlin Lapdog. Iyada oo ay ugu wacan tahay dabeecadda aan caddayn, heerka loo yaqaan 'Affenpinscher' ayaa kaliya lagu sharaxay inuu yahay wax kasta oo aan u ekaanayn 'Miniature Schnauzer'. Si kastaba ha noqotee, markay ahayd 1913, farqiga u dhexeeya farqiga muuqda ayaa la aasaasay, waxaana guud ahaan la aqbalay in daanka Affenpinscher uu ahaado mid toogasho ka hooseeya.
Isku soo uruurinta ugu culus ee taranka Affenpinscher ee Jarmalka ayaa ka dhacday Bavaria, Munich, iyo Saxony. Waxaa jiray koror ku yimid diiwaangelinta Affenpinscher waxyar uun ka hor Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, laakiin tirooyinku way yaraadeen intii lagu jiray Dagaalkii. Affenpinschers waxay ku raaxaysteen barwaaqo gudaha Jarmalka laga soo bilaabo bartamihii-1920's ilaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Affenpinscher waxaa la dhigey Buugga Websaydhka ee 'American Kennel Club's Stud Book' sanadkii 1936, waxaana la qaatay Heer ku saleysan heerka Jarmalka ee markaa jira. Kuwii ugu horreeyay ee Affenpinschers-ka ah waxay soo galeen Buugga Stud, saddex bitch iyo hal ey, dhammaantood waxay ahaayeen soo dejin Jarmal ah oo ay leedahay Mrs. Bessie Mally oo ka tirsan Cicero, Illinois. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in midkoodna Dagaalkii Labaad ee Dagaalkii Labaad ee Dunida midkoodna uusan gacan ka geysan jiritaanka maaddaama ay maanta ka jirto Mareykanka.
Maanta 'Affenpinscher' wuxuu raadraaci karaa asalkiisa eeyaha laga keenay Jarmalka ee Mrs. Evelyn Brody, qiyaastii 1950. Mid ka mid ah soo dejinta Mrs. Brody, Bub V. Anwander, wuxuu ahaa Horyaalkii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee noocaas ah.
Astaamaha & Dabeecadda
Affenpinscher, ama 'Daanyeer Terrier', ayaa magaciisa ka helay muuqaalkiisa wajiga oo aan caadi ahayn. Oo leh indho waaweyn, madow, daanka soo baxaya iyo dibnaha hoose, iyo hawraarro wejiga ka soo baxaya; dhammaantood waxay xoojinayaan muuqaalka 'daanyeer u eg'.
Si kastaba ha noqotee, Affenpinscher wuxuu sameeyaa wax ka badan uun daanyeer. Noocani gaarka ah wuxuu muujinayaa jilicsanaanta xisaabinta leh awoodiisa hore; inta badan laabta iyo rogista alaabada lagu ciyaaro (ama ugaadha).
Affenpinscher waa nooc ka mid ah Kooxda Toy. Cabirkoodu wuxuu u dhexeeyaa 9 ilaa 12 inji oo meesha engegga ah, waana inuu culeyskoodu ahaadaa qiyaastii 8 ilaa 10 rodol. Dhererka jirku waa inuu qiyaas ahaan la egyahay dhererka, isagoo siinaya eyga nooca jirka “sanduuq u eg”. Koodhku waa wirey, nooca Terrier-ka oo u baahan 'xoqitaan'.
Dabeecadda Affenpinscher waxaa badanaa lagu sifeeyaa inay tahay 'muuqaal qatar ah'. Waxaa la sheegay inay yihiin 'ruffiyiin yar oo wata swagger', sidoo kale. Waxay u muujiyaan daacadnimo weyn qoyskooda iyo asxaabtooda, waxayna ka baqayaan khatar kasta.
Caadi ahaan waa nooc deggan, laakiin waxaa loo yaqaan 'dhimbiillo dabka iyo dabka'.
Sida nooc kasta, Affenpinschers waa shaqsiyaad. Dhammaantood waxay leeyihiin shakhsiyaad u gaar ah iyo jilitaanno. Sifooyinka lagu liis garayn karo waxay ku saleysan yihiin waaya-aragnimadayda, mana aha inay qasab tahay in loo nisbeeyo nooca oo dhan. Si kastaba ha noqotee, way xushmeeyaan sheegashada.
Ku-xirnayaasha, ku-saleysnaanta dabeecad xumadooda adag, way adkaan kartaa in guriga la jabiyo.
In kasta oo ay u muuqato inay ku jiraan qaybta 'hypo-allergenic', runti way daadiyaan… mararka qaarkood si xushmad leh.
Qaar ka mid ah Affens kuma wanaagsana carruurta.
Qaar ka mid ah Affens ma la jaan qaadi doonaan xayawaanka kale; gaar ahaan jiirka (Hamsters, gerbils, ferrets, jiirka, jiirka, iwm…). Affens ayaa loo soo saaray sidii jiiriyayaal, dhaxalkoodiina wali wuxuu ku gubanayaa calooshooda.
Affens waxay u janjeeraan inay ka boodaan ama 'ka duulaan' meelaha sare.
Ma ku yimaadaan midabbo aan ahayn madow?
Haa. Affens waxay noqon kartaa madow, qalin, dufan, madow iyo midab, ama casaan.
Ma u baahan yihiin wax badan oo is-qurxin ah?
Fikrad ahaan, maya. Koodhku waa wirey, nooca terrier-ka oo aan u baahnayn cadayasho iyo maydhasho joogto ah. Si kastaba ha noqotee, waxay u baahan yihiin 'in laga xayuubiyo' si loo ilaaliyo jaakad caafimaad qabta. Tani waa xirfad fudud oo lagu baran karo. Waxay ka kooban tahay soo jiidaya wax dhintay, timo caajis ah… iyadoo timaha cusub ee dhalaalaya looga tago. Inta badan ee aad karti u leedihiin ee ku saabsan inaad ka dhigtaan lebiskaaga 'Affen', in yar oo daadin ah ayaa wax laga qaban doonaa.
Sidee ayay ula joogaan carruurta?
Waxay kuxirantahay Waxaan haystaa Affen jecel carruurta, iyo mid kale oo aan iyaga ka jeclayn. Waxaan u maleynayaa inay kuxirantahay waxa lagu soo barbaariyay, iyo suurta galnimada hadii khibrad xun ay soo mareen. (yacni ilmuhu ku tuuro)
C’mon, waa ey eey ku ciyaaraan. Sidee adag oo ay noqon karaan?
Aad. Affens waa nooc laf dhabarta ah, oo aad u adag. Maaha inaad dhahdid waa inaad dhiirrigelisaa guryo culus, laakiin xoogaa turunturooyin ah waligood ma joojin 'Affen' go'an.
Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Adhijirka Caddaani Jarmalka ah
14 asbuuc jir cunug hurdo
waa maxay kareemka Ingiriisida dahabiga ah
magacyo gaar ah oo loogu talagalay collies xuduudaha
ilaa intee ayay nool yihiin isku darka chihuahua terrier
gariir eey iyo kor u tuurid